Album အသစ်နဲ့ နတ်သက်ကြွေလာတဲ့ Girl group အသစ်ဆက်ဆက်လေး Momoland
မိန်းမလှလေးတွေပါဝင်တဲ့ Korean Girl group အသစ်ကလေး Momoland ကတော့ Album အသစ်နဲ့ Kpop လောကကို လှုပ်ခတ်လေအုံးမလား။ 2016 မှာဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး အရည်အချင်းရှိတဲ့ မိန်းမပျိုလေးတွေပါဝင်တဲ့ Momoland ကတော့အဖွဲ့ရဲ့လေးခုမြောက် Mini Album အသစ်ဖြစ်တဲ့ Fun to the World ကို June လ 26 ရက်နေ့မှာပရိသတ်ရှေ့မှောက်အရောက်ချပြခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Album ထဲမှာဆိုရင် BAAM (Title), Ververy , Bingo Game, Only One You နဲ့ BAAM (Instrumental) စတဲ့သီချင်း ၅ ပုဒ်ပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Momoland ရဲ့ယခင် Album တွေဖြစ်တဲ့ Welcome to Momoland(2016), Freeze!(2017) နဲ့ Great!(2018) တို့ဟာ positive ဆောင်တဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ များစွာရရှိခဲ့ပါတယ်။
အဖွဲ့ရဲ့ Bboom Bboom ဆိုတဲ့ Song MV ဟာဆိုရင် World Digital Song Sales Chart မှာ Top5ဝင်ခဲ့တဲ့အထိ မထင်မှတ်ထားတဲ့ အောင်မြင်မှုကို သိမ်းပိုက်နိုင်ရုံသာမက Momoland ဟာ 2018 ရဲ့ top kpop idols တွေအဖြစ် ikon နဲ့အတူ သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်။ အဖွဲ့ဟာ Mini Album အသစ်ထဲမှာ ပါဝင်မယ့်သီချင်း ၅ ပုဒ်ထဲကမှ Title track ဖြစ်တဲ့ BAAM ရဲ့ teaser ကို June 20 မှာချပြခဲ့ပြီး MV ကိုတော့ အခြားသီချင်းတွေနဲ့အတူ 26 ရက်နေ့မှာ ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီ teaser ထဲမှာအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကို ကိုရီးယားရိုးရာဝတ်စုံနဲ့ မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး နန်းတော်ထဲမှာပါတီပွဲကျင်းပနေသလိုခံစားရမှာပါ။ ဒီ BAAM MV ဟာဆိုရင် itunes ရဲ့ အကျော်ကြားဆုံးနဲ့ အရောင်းရဆုံးထိပ်တန်း kpop song 100 မှာ နံပါတ် ၂ အဖြစ်ရပ်တည်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းမလှလေးတွေရဲ့ ညှို့အားအပြည့်ပါဝင်နေတဲ့ BAAM teaser လေးကတော့ဒီမှာပါနော်……
အဖွဲ့အတွက် Album အသစ်မှာအသုံးပြုမယ့် Cover ကိုလည်း ကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
PREVIOUS POST Previous post: ခရီးဝေးသွားတဲ့အခါ သင့်ရဲ့ playlist မှာ ဒီလိုသီချင်းလေးတွေ ရှိထားဖို့တော့ လိုမယ်နော်…
NEXT POST Next post: Oricon ရဲ့ Single chart မှာ နံပါတ် ၁ ချိတ်နေတဲ့ Got7 ရဲ့ New Era